जाडो crackling आगो निर्माण गर्न सही समय छ, सुरक्षित ढलान मारा, Snowmen निर्माण र चिया एक राम्रो कप संग snuggle. दुर्भाग्यवश, यो सबै छैन रमाइलो र खेल. जाडो पनि सबैभन्दा छली सडक केही सिर्जना अवस्था. किनभने यो हामी सबै भन्दा सम्म सीतनिद्रा लागि सम्भव छैन छ वसन्त, यहाँ छन् सुझावहरू तपाईं जाडो समयमा सवारी चलाउँदा सुरक्षित रहन कसरी आवश्यक.
देखिने: तपाईंको गाडीको एन्टेनामा चम्किलो रंगको कपडा बाँध्नुहोस् वा स signal्केतको संकेत दिन लुगा अप गरिएको विन्डोको माथि कपडा राख्नुहोस्।. रातमा, यस घरको छानो प्रकाश यदि सम्भव मा राख्न. यो केवल बिजुली को एक सानो रकम प्रयोग र सजिलो rescuers तपाईं फेला पार्न लागि गर्नेछ.
निकास पाइप खाली: बनाउन निकास पाइप हिउँ संग भरा छैन पक्का, बरफ, वा माटो. इन्जिन चलिरहेको छ, जबकि एक अवरुद्ध निकास पाइप वाहन को यात्री कक्ष मा लीक गर्न घातक कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास हुन सक्छ.
वार्म रहन: चिसो बाट आफ्नो शरीर ढाक्नु गर्न जो उपलब्ध छ प्रयोग. यो तल्ला मैट समावेश गर्न सक्छ, अखबार, वा कागज नक्शा. पूर्व-प्याक कंबल र भारी वस्त्र आपतकालीन को मा मामला प्रयोग गर्न.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)